Amboary ny sary fialan-tsasatrao amin'ny Filterra | Vaovao IPhone
Amboary ny sarinao fialan-tsasatra amin'ny Filterra
Mandehandeha hatrany amin'ny iOS App Store izahay hahitako raha misy zavatra mahaliana tonga. Hitanay tamin'ity indray mitoraka ity ny fampiharana fanovana sary somary feno izay tianay hizara aminao. Miaraka amin'i Filterra ianao dia afaka manova amin'ny fomba tena mahaliana ireo sary izay azonao nalaina nandritra ireo fialantsasatra Krismasy io, na nankany amoron-dranomasina ianao na raha tany an-tendrombohitra. Izahay dia hanazava kely ny mahasamihafa an'i Filterra, ary maninona no mety mahaliana ny misintona an'ity fampiharana fanovana sary maimaimpoana ity ao amin'ny iOS App Store.
Voalohany indrindra isika dia ho voafitaky ny tenin'ny mpamorona:
Hihaona amin'i Filterra, ilay tonian-dahatsoratry ny sary eo an-toerana izay hamela anao hanadio ny sarinao isaky ny mila izany ianao.
Topazo maso ny fanangonana ireo sivana manara-penitra, fitaovana ary vokatra manokana izay hahatonga ny fahaizanao mamorona bibidia sy hahatonga ny sarinao ho toa tsy nisy toy izany!
Milalaova amin'ny safidy sy ny fahafaha-manao rehetra ahafahanao mampihatra fanatsarana marobe sy karazana fanampiny fanampiny amin'ny sarinao.
Maimaimpoana ary feno tanteraka ilay rindranasa, tsy latsaky ny 105 MB, saingy tsy manana atiny azo sintomina hatraiza hatraiza, toy ny hafa. Marina fa "maimaim-poana" izy io, satria manolotra atiny anaty fampiharana fa tsy maintsy aloantsika isan-karazany., fa tsy be loatra ary tsy manakana ny fampiasana azy.
Afaka manao confection haingana isika, sary izay hitovy amin'ny sarimiaina, sticker ary mazava ho azy fehezanteny izay miaraka amin'ny sarinay hanehoana izay tsapantsika. Ny zava-dehibe dia hoe intuitive izy io, ary misy izany. Nahazo hevitra tsara be dia be tao amin'ny iOS App Store izy ary amin'izao fotoana izao dia voamarika maimaimpoana avokoa ny sivana sy ny fonosana sticker, na dia tsy fantatray aza hoe haharitra hafiriana izy ireo. Mazava ho azy, aza adino fa manana doka mirindra izy io, izay mety hiteraka fahasosorana kely amin'ny fampiasana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Amboary ny sarinao fialan-tsasatra amin'ny Filterra
Ny iPhone 7 dia mampiseho amintsika amin'ny sary ny faran'ny taona nanerana an'izao tontolo izao